भिक्षु फलबाट मोग्रोसाइडहरूको अल्ट्रासोनिक कोल्ड-वाटर एक्स्ट्र्यासन - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
भिक्षु फल (S. Grosvenorii) निकाल्नुहोस र विशेष रूप देखि यसको यौगिक mogroside V एक प्राकृतिक गैर-कैलोरिक मीठाने को रूप मा प्रयोग गरिन्छ।
अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष एक सरल, छिटो, पुन: पेशात्मक, र विश्वसनीय निष्कर्षण विधि सफलतापूर्वक लागू गरिएको गैर-क्यालोरी मिठाईरबाट भिक्षु फलबाट लागू गर्न।
अल्ट्रासोनिक निकासी पानी या साल्वेट्स जस्तै इथेनॉल वा मेथनॉल जस्तै प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। पानी निकासी एक हरी विधि हो जसले उच्च गुणस्तरको माइग्रोइडाइड निकाटहरू उत्पादन गर्न अनुमति दिन्छ।
मधुमेहहरूको रूपमा मोग्रोसोड्स
मोन फलले क्युबब्राइटन-टाइप ट्रिटरपेनडिडहरू जसले माइग्रोसाइडको रुपमा चिनिन्छ। विशेष रूप देखि माइग्रोसाइड V को ध्यान दिए को रूप मा यो एक मीठापन नियमित चीनी को तुलना मा 100-250 गुणा मीठा प्रदान गर्दछ, जबकि शून्य क्यालोरी युक्त। यसैले भिक्षु फल निकाल्दो आजकल एक लोकप्रिय प्राकृतिक, शून्य-क्यालोरी पादरीवाला हो। यसको मीठा स्वादयुक्त मोग्रोसाइड्सले विभिन्न स्वास्थ्य फाइदाहरू जस्तै एन्टिओक्सिडिएट र एट एसिमेन्ट गुणहरू देखाउँछ, जसले यसलाई धेरै तरिकामा उपभोग गर्दछ।
मोनरोसाइडको अल्ट्रासोनिक एक्स्टेन्शन मोन फलबाट
अल्ट्रासोनिक निष्कर्षण प्रविधिको सेल संरचनाहरू खोल्दै र जन स्थानान्तरण बढाएर निष्कर्षण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनका लागि जानिन्छ। माइग्रोसाइड निकाटहरू धेरै कुशलतापूर्वक फलबाट कच्चा माल वा पानी वा विभिन्न विलायक समाधान प्रयोग गरेर विलायक रूपमा बरामद हुन सक्छ। सोन्याशन एक हल्का, गैर-थर्मल उपचार हो, जुन सर्वोच्च गुणको भिक्षु फल निकासी उत्पादन गर्न ठुलो पानी-निष्कर्षण गर्न सकिन्छ। हल्का प्रक्रिया को तापमान र कठोर सल्वेट को रोकथाम द्वारा माइग्रोसाइड को थर्मल र रासायनिक गिरावट को रोकथाम हुन्छ।
तथापि, साल्वेटको प्रयोगमा, sonication को विभिन्न निकासी मीडिया संग प्रयोग गर्न सकिन्छ। वनस्पति विज्ञानबाट अल्ट्रासोनिक निकासीको लागि सल्वेटहरूको प्रयोगको बारेमा थप पढ्नुहोस्!
उदाहरणको लागि, लुओ एट अल को एक मामला अध्ययन मा। 2016 मा मेथनोल / पानी (80:20 v / v) मा माइगोस्राइड्स को अल्ट्रासाउन्ड-सहायता ठोस-तरल निकासी को लागी सुविधाजनक, लागत प्रभावी, र उच्च reproducible हुन को लागि इष्टतम नतीजा मिलयो।
गैर थर्मल, चिसो निकासी
निष्कर्षण समय घटाउँदछ
रेट्रो फिटिंग सम्भव छ
निकासीका लागि उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक्स
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स’ offers सानो, मध्य आकार र औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर, जुन 24/7 सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तपाईंको कच्चा माल र प्रक्रिया भोल्युमको आधारमा, हामी तपाईलाई अल्ट्रासोनिक निष्कर्षण प्रणाली प्रदान गर्न सक्दछौं जुन तपाईको आवश्यकताहरु अनुरूप हुन्छ। तपाईं ब्याच र निरन्तर निकासी बीच छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। पछि स्केल-माथि ठूलो प्रक्रिया क्षमताहरू सजिलैसँग गर्न सकिन्छ किनकि अल्ट्रासोनिक प्रक्रियाहरू रैखिक रूपमा मापन गर्न सकिन्छ।
हेलसेस्टरको पायलट र औद्योगिक प्रणालीले धेरै उच्च प्रवृतिहरू प्रदान गर्न सक्छ – 200μm सम्म विश्वसनीय र निरंतर 24/7 अपरेसनमा चलिरहेको एप्सप्ले चलाउन अनुमति दिन्छ। अझ उच्च प्रवृतिहरूको लागि अनुकूलित अल्ट्रासोनिक सोनोट्रोड उपलब्ध छ। हेलस्लेचरको अल्ट्रासोनिक उपकरणको बलियोताले भारी शुल्कमा र वातावरणको माग गर्न अनुमति दिन्छ।
उच्च शक्ति अल्ट्रासोनिक निकाक्टरहरूको लामो-समय अनुभवी निर्माताको रूपमा, हेल्सेचर तपाईंको परिष्कृत साझेदारको परिष्कृत निकासीको लागि हो। हामी परामर्श र हाम्रो ग्राहकहरु संग हाम्रो ज्ञान संग सहायता र औद्योगिक स्थापना को लागि व्यवहार्यता परीक्षण देखि मार्गदर्शन।
अहिले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्! हामी तपाईंको साथ निकासी को आवश्यकताहरु लाई चर्चा गर्न खुशी छौँ!
विभिन्न सल्विन्टहरूको प्रयोग गर्नुहोस्
गैर थर्मल (चिसो) विधि
सुरक्षित र सजिलो प्रयोग
Jing Liu, Can Liu, Yonghai Rong, Long Rong (2012): विभिन्न निकासी विधिहरु संग Mogroside र Limonin को निकासी र यसको मोडेलिंग। अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल अफ फूड इन्जिनियरिङ, वॉल्यूम 8, अंक 2. 1556-3758।
लुओ जे., शि एच।, जान के., क्यू X., गुओ वाई।, मा एक्स। (2016): धेरै मिठाई माइग्रोसाइड्स को एक साथ दृढता को लागि tandem मास्क स्पेक्ट्रोमेट्री विधि संग तरल क्रोमैटोग्राफी सर्रियािया ग्र्रोनेनिरी को फलहरु र यसको मार्केट मिडनेजर्स। J Sep Sci। नोभेम्बर 2016; 39 (21): 4124-4135।
सिरियाया ग्रोनेसनेरी (स्विङ्गले) को फल, लुबो हनु गुओ, बुद्ध फिट वा बुढो फलको रूपमा चिनिने एक हेब्रसीस दाख को फलहरु लाई एशिया बाट व्यापक रूपमा फेला पार्न सकिन्छ, जहाँ उनीहरुले खाडी, घुटनी र कब्जेर उपचार गर्ने औषधीय बिरुवाको रूपमा मानिन्छ। पश्चिमी संसारमा, भिक्षु फल निकायहरूले खाना र पेय पदार्थको लागि गैर-क्यालोरी स्वीडेनको रूपमा उच्च लोकप्रियता पाएका छन्।
कच्चे लुओ हान गुओ फल निकासी को मुख्य घटकहरु cucurbitane ग्लाइकोसाइड (माइग्रोसाइड, विशेष रूप देखि मोग्रोसाइड्स II, III, IV, V, र VI) को रूप मा राम्रो तरिकाले समेत flavonoids र melanoidins छन्।
Mogrosides क्यूकबर्बरेन-टाइप ट्रेरिटेन्नोइड ग्लाइकोसाइडहरू छन्, जुन तीव्र मीठो स्वादको लागि जिम्मेवार छन्। भिक्षु फल’ glycosides विभिन्न mogrosides देखि बनाइन्छ। Mogroside V फलको मुख्य मीठोपन घटक हो र एसोसिएसनमा अपेक्षाकृत उच्च मात्रा (0.50%) मा उपस्थित छ। शुद्ध माइग्रोसाइड V निकासी लगभग हो। Sucrose को एक एकाग्रता (तालिका शर्करा) को तुलना मा 250-450 गुणा मीठा
सनक फल निकासी, जुन विलायक को रूप मा पानी को उपयोग गरेर पृथक गरिएको छ, लगभग छ। सुक्रोस भन्दा 150 पटक मिठो हुन्छ र5घन्टाको लागि पानीमा उबलिएको बेला स्थिर हुन्छ।
अनुसन्धानले प्रदर्शन गरेको छ कि माइग्रोसाइड V एन्टिओक्सिडेंटको रूपमा कार्य गर्दछ जुन प्रतिक्रियात्मक ओक्सीजन प्रजातिहरू (ROS) स्क्यानिङ गर्न सक्छ र यसले डीएनए क्षति रोक्छ। मोनका फलको माइग्रोसाइडहरूको यी धेरै विशेषताहरू निकाले एक उच्च मूल्यवान उत्पादनमा परिणत गर्दछ। अल्ट्रासोनिक-इनसेन्स एसिशन सफलतापूर्वक खाद्य र पेय पदार्थ र पेय पदार्थको पोषण प्रयोगको लागी एमग्रोसाइडोरी (मास्क फल) बाट माइग्रोसाइड V को निकाल्न र अलग गर्न अनुप्रयोगलाई सफलतापूर्वक लागू गरिएको छ।